Imba>Our Services>Chirongwa Chekushandisa>EYE
OOG (Kunze kweGauge) izita rakapfupika kune zvese zvakawandisa midziyo kana zvisiri zvemhando midziyo, kunyanya zvinosanganisira: yakavhurika-yepamusoro mudziyo, flat rack mudziyo (kana chimango mudziyo),
reffer mudziyo, chipfeko hanger mudziyo uye tangi mudziyo.
Sohologistics inotakura inorema kutakura chirongwa chekufambisa chirongwa chemabasa eprojekti sekuvhura kumusoro kwepamusoro mudziyo uye flat rack mudziyo
Vhura Pamusoro Mudziva （(inozivikanwa seOT kwenguva pfupi） iri mhando yeOOG.
Sezvinoreva zita iri, pamusoro peiyi mhando yemidziyo yakavhurika, iyo inogona kukamurwa kuita mhando mbiri dze hard OT uye nyoro OT nekuda kwemidziyo yepamusoro yepamusoro.
Hard OT ine isingashatisike simbi padenga nepamusoro iyo nyoro OT iine mamwe maburi anobvisa uye inowira canvas pamusoro,
OT yakakodzera kutakura yakakwira inorema cargos.
Zvinoenderana nenhumbi dzakasiyana dzekutumira, maCargos asina kupfuura 4m pakakwirira anogamuchirwa.
Flat Rack Container, inowanzonzi seyemidziyo mudziyo kana FR mudziyo.
Iyo yemidziyo mudziyo inovakirwa pane yakajairwa mudziyo inobviswa nepo padenga nepamadziro emadziro emadziro.
Nepo dzimwe nguva yekupedzisira madziro ebhodhi zvakare inobviswa, pane chete yakasara yepazasi peturu uye mana emakona emakona, tinoitumidza iyo flat rack mudziyo.
Iyo midziyo yeFR inoita basa rakakosha mukufambisa-isina midziyo yemidziyo yekufambisa ine huwandu hwayo hwakatsetseka peturu kuitira kuti uwane mutoro wekuremerwa. Iyo inonyanya kutakura cargos yehurefu-hwakareba, pamusoro-upamhi, pamusoro-kureba super hombe michina kana michina kana inorema cargos.
Zvinoenderana neyakasiyana ngarava liners zviyero, iyo cargos isina kupfuura 4.5m yakafara, 4m urefu hombe cargos inogamuchirwa. Uye pakureba, Inofanira kuva mukati me15m zvichienderana nehuremu hwekutakura. Kunze kweizvozvo, teerera kuti iyo yakareba-yakareba cargos haigoni kuvhara mudziyo wekusimudza nzvimbo pamativi ese maviri ekusimudza nzvimbo (kusimudza nzvimbo kureba pakati pe2.08m)
Iwo ma cargos anoda anoita isina mvura uye yekunyorova kana kurongedza pane mudziyo kana zvichidikanwa sezvo gorofa rack mudziyo kazhinji rakarara pamusoro yepamusoro yemidziyo yemidziyo isina kusungwa.
OUT OF GAUGU-KUSVIRA ZVINOKOSHA
mhando 箱箱 内部 尺寸
(Mamirimita) 箱 门 开 度 尺寸
(Mamirimita) 载重 负荷
urefu upamhi urefu upamhi urefu upamhi urefu Max zvakakomba Tare Max kubhadhara
20OT 5800 2330 2300 2330 2260 5600 2200 30480 2250 28230
40OT 11800 2330 2300 2330 2260 11600 2200 30480 3900 26580
Sohologistics ine chirongwa chenguva refu chekubatana pamwe nevakawanda vakakurumbira liners seMSK, ZIM, YML, CSCL, WHL, KMTC uye CMA munyika. SHL ine zvakanakira mune yekukurumidza nyanzvi yekushanda kwetiquote uye ishumire wese mutengi nemutsa.
Iyo yega yega yekutengesa kunze & yekunze vhoriyamu yeOOG mashandiro anopfuura 800pcs iyo inovhara epasi rose zvigadziko. SHL zvakare ine masevhisi ekubhadhara machira, kuzivisa tsika, kutakurwa kwemukati, kutarisisa, kusanganisa uye kusunga, turera, kunze kwenyika kujekesa, musuo kune rimwe-kumira logistics mhinduro kune inorema kutakura zvinhu zvekutakura zvinhu.
OOG inosunga uye yekusimbisa nheyo
1.Iyo nheyo yekusunga zvinobudirira nekusimbisa pakati pekutakura zvinhu nemudziyo ndeyekudzivirira kutakura zvinhu kutakura kumativi ese echitambi chidhiraini kana kutsvedza kuenda kumativi maviri (nyorovesa) panguva yekusimuka nekufamba muchikepe kuti udzivise chero kukuvara kwechikara. .
2. Zvinorambidzwa kumisa imwe kumagumo ebhaffle (Rack) yemudziyo mudziyo uchiisa imwe yekupedzisira pasi. Mheto mbiri dzedhivhizheni dzinofanira kumisikidzwa kana kuiswa pasi panguva imwe chete.
3.Iyo makatuni anofanirwa kuve akarongedzwa zvakaenzana pasi pehuni pamapuranga emuti wemidziyo zvichienderana nehuremu. Usaisa kunetsekana kwakawanda pamugumo mumwe. Kusunga uye wedges zvinofanira kushandiswa kudzivirira cargos kubva capizing uye kutsvedza refuitudinally kumativi ese maviri.
Deredza pakati penzvimbo yekukwevera kweiyo inorema cargos kana iyo nzvimbo yegirafu yakanyanya kukwirira.
4.Vakarara zvakafanira pakati pekaragosi uye pasi pechinhu chemukati mudziyo kuti uwedzere kupokana kuringana. Tsigiro dzinofanira kuzadzwa pakati pemakaraguru nemabhairi pamagumo ese maviri emidziyo yemudziyo kudzivirira kufamba kwenguva refu.
5.Iyo inorambidzwa kufukidza iyo ina Corner Casting zvikamu zvemukati weiyo kontrakiti kana cargos kana kusimbiswa, ndiko kuti, Iko Kusimudza Pfungwa; Iwo musiyano uripo pakati pemakotari uye wakaomarara wemudziyo wemidziyo unofanirwa kuchengetedza kanenge 30cm, uye kusunga uye kusimbisa kuchave kwakajairika, zvikasadaro mashandiro emuchadenga anogona kusasimudza aya anorema cargos.
6.Iyo mutoro weimwe neimwe inosimbisa mapoinzi pamativi ese emidziyo yemidziyo inowanzo kuve matani mashanu.
Kusunga kunofanira kudzivirirwa kuti utarise pane imwe yemasimbisi ekusimbisa.
7.Zvinorambidzwa kushandisa simbi zvipikiri kumhanyisa vakarara kana wedanda wedanda vachipinda mupuranga rehuni yemudziyo, kuitira kuti pasave nekukuvadzwa kumudziyo wemidziyo uye kuderedza iwo wekutakura.
8.Iye inosimuka waya tambo kana nylon yekupusha bhanhire inofanira kuchengetwa yakanyatsogadzika mamiriro, tambo ye waya inofanira kuve yakagadzirirwa ine switchbuckle fastener uye nylon yekupusha bhanhire inofanira kuve yakagadzirirwa ne-anti-reverse ratchet.
10.The flat rack mudziyo, kusanganisira kana mabheti akaiswa mukati memativi maviri emapuranga, inogona kungoiswa pane dhiziri rechikepe musimboti maererano nemaitiro epasi rese sekusimudza nzvimbo (ndiko kuti, kukanda kona) inodzikiswa ne cellguide pamudziyo.
20'Collapsible Flat Racks
40'Collapsible Flat Racks
Zvinodzora zveFlat Racks
20'Open Pamusoro mudziyo
40'Open Pamusoro mudziyo
Rondedzero Yakavhurika Misoro